Wararka Maanta: Isniin, Sept 10, 2018-Wararkii ugu danbeeyay Weerar ismiidaamin ah oo lagu bur buriyay xarunta degmada Hodan
Ilaa 7 ayaa la qaxiijinayaan in ay ku dhinteen qaraxan sidoo kalana waxaa jiray dad dhaawacyo kala duwan qaba oo laga qaaday goobta kuwaa oo lagu daweynayo xarumaha caafimaadka.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow oo tagay goobta ku eedeeyay Al-shabaab in ay ka danbeeyeen Qaraxii maanta ka dhacay degmada Hodan, isaga oo sheegay in ay beegsadeen dad rayid ah oo xiligaa ku sugaan degmada Hodan.
Waa Qaraxii labaad ee noociisa ah oo todobaad gudihii lagu weerarro xarun degmo, 02bishan September ayeey aheyd markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay sidan oo kale lagu bur buriyay xarunta degmada Howl-wadaag, waxaa dadkii ku dhintay weerarkaa ka mid ahaa carruur dugsi Qur’aan ka baraneysay xarun aan ka fogeyn degmada.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkam Ismiidaamin ah, iyaga oo warka arintan ku saabsan soo dhigay barta Internet-ka.
Waqtiga uu qaraxan dhacayay dhinaca kale xarunta Gen Kaahiye ee magaalada Muqdisho waxaa ka soctay xaflada furitaanka Kalfadhigga Afaraad ee Golaha Shacabka.
Weerarrada lagu beegsanayo xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ah arin ku cusub beegsiga Al-shabaab oo inta badan weerarradoodu u badnaayeen saldhig-yada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowga Africa AMISOM.